Puntland oo la liicliiceysa deymo ay ka tagtay xukuumadii Faroole – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Maamulka Puntaland ayaa la liicaya deymo iyo mushaar la’aan soo wajahday shaqaalaha iyo ciidamada, iyadoo xukuumadda cusub ee maamulkaas ay xilka heyso muddo 6 bilood ah.
Maamulka haatan jira ee uu madaxda u yahay C/weli Cali Gaas ayaa waxaa dhulka lasoo galay deymo farabadan oo ay uga tagtay xukuumaddii C/raxmaan Faroole.
Sida ay qortay Garower Online oo aad ugu dhaweyd madaxweynihii hore ee maamulka Puntland C/raxmaan Faroole, boqolaal kun oo dollar ayay ka tagtay xukuumaddii Faroole, taasoo xukuumadda Gaas maaro u weyday.
Deyntii ay ka tagtay xukuumaddii Faroole bilowgii sanadkaan ayaa sida ku cad dukumiinti la helay waxey gaareysaa ilaa $1,121,000 dollar.
Wareysiyo uu bixiyey madaxweynaha xilligaan ee maamulka Puntland C/weli Gaas ayuu ku sheegay iney xukuumaddii Faroole ku wareejisay deymo farabadan oo lagu leeyahay maamulka, ayna leeyihiin shirkado kala duwan.
Lacagaha deymaha ah ee Faroole ku wareejiyey Gaas oo ay leeyihiin shirkado kala duwan ayaa u kala qornaa sidan:
1- Shirkada Dahabshiil $400,000
2- Raashinka ciidamada Daraawiishta ee deynta ah $150,000
3- Shirkadii dhistey dhismaha Madaxtooyada Puntland $160,000
4- Direys iyo agab ciidan $72,000
5- Shirkada dhiseysay Terminal-ka Garowe $149,000
6- Isbitaalka dhagacadde (Kharashkii lagu daaweey dhaawacyo laga keeney Kismayo) $25,000
7- Shirkada P.I.I Tech $40,000
8- Ganacsato+kharashaad kale $125,000
Warar soo baxay ayaa sheegaya in maamulka Puntland ka codsaday beesha caalamka iney lacagtaas ka bixiso, hase ahaatee wararka ayaa sheegaya in laga diiday.
Maamulka Puntland ayaan dhowr bilood mushaar siinin shaqaalaha iyo ciidamada, waxaana todobaadkii hore xerada 54-aad ee ku dhow Garowe ku mudaharaaday ciidamada Daraawiishta uu mushaar la’aan ku dhacday.
Todobaadkii hore, madaxweyne Gaas ayaa si kedis ah booqasho ku tegay qaar ka mid ah xarrumaha wasaaradaha Puntland, kuwaasoo haawanayey oo aysan ka socon wax shaqo ah, iyadoo arrintaas sabab looga dhigay mushaar la’aan.